कृष्णनगरका जेष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण
कपिलवस्तु फागुन ३- कपिलवस्तुका २ सय १० जना जेष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण गरिएको छ । जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं ९ का २ सय १० जना जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कम्बल वितरण गरिएकाे हो ।
कम्बल वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहले जेष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरुप कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो । नगर प्रमुख शाहले कम्बल वितरण गर्दै भन्नू भयो
जेष्ठनागरिकहरूलाई चिसाे बाट बच्नका यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनु भयो । सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जनताकाे पैसा जनता सम्मा पुग्न याे राम्राे मध्यम भएको र यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिदै जाने जानकारी दिनु भयो ।
कृष्णनगर नगरपालिका वडा न. ९ बहादुरगंजको आर्थिक सहयोग र चित्रंश मिडियाकाे सहकार्यमा न्यानो कम्बल वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष राम मिलन चौधरीले जानकारी दिनु भयो । वडा कार्यालयकाे प्रङ्गणमा एक कार्यक्रम गरि कम्बल वितरण गरिएकाे वडा अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो ।
काठमाडौं । दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो शान्त मुलुक
एजेन्सी, १६ फागुन।भारतमा कुखुराको भालेले लियो आफ्नै मालिकको ज्या'न: भालेलाई प्रहरी कार्यालय लगियो
इजरायलमा नेपाली चेलीको उपचारको क्रममा निधन
भारतमा टिपरको ठक्करबाट नेपाली दम्पतीको मृ'त्यु
मनहरि तिमिल्सिना। कसको पार्टी, कस्तो पार्टी ?
कस्तुरीको प्रेम उनको राजालाई